Manatevin-daharana an'i Coach, Versace ary Givenchy i Dior amin'ny 'fanafintohinana' an'i Shina momba an'i Taiwan
Home » Vaovao momba ny lamaody » Manatevin-daharana an'i Coach, Versace ary Givenchy i Dior amin'ny 'fanafintohinana' an'i Shina momba an'i Taiwan
Herinaratra lamaody frantsay Dior nanjary marika farany lafo vidy farany taorian'ny Versace, Givenchy sy Coach, Versace tratry ny tantara ratsy momba ny tsy fivadihan'ny teratany sinoa.
Noterena hiala tsiny i Dior noho ny nampisehoany sarintany iray an'ny Repoblika Entim-bahoakan'i Sina (Sina) izay tsy nahitana ny fanapahana samirery Repoblikan'i Sina (Taiwan).
"Dior aloha dia nanolotra fialantsiny fatratra ho an'ny fanambarana diso sy fanolorantena diso nataon'ny mpikambana iray ao amin'ny Dior nandritra ny famelabelaran-kevitra tao amin'ny campus," hoy ilay marika tao amin'ny tambajotra sosialy Weibo tamin'ny Alakamisy.
Nanampy io fanambarana io fa manaja ny politikan'i 'Shina tokana' i Dior ary “miaro fatratra ny fiandrianam-pirenenan'i Shina sy ny tsy fivadihan'ny faritany”, ary nampanantena ny hisorohana ny lesoka tsy hitranga amin'ny manaraka.
Tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity dia nanao famelabelarana i Dior izay nanehoany ny fivarotany tao amin'ny Repoblika Entim-bahoakan'i Sina (Sina), fa ny Repoblikan'i Sina (Taiwan) kosa nesorina tsy ho sarintany. Avy hatrany dia tsikaritry ny mpanatrika ny loza, izay nanontany ny antony tsy fahitana ilay nosy.
Nanazava ilay mpiasa fa kely loatra ny sary ary noho izany dia kely loatra i Taiwan ka tsy azo aseho. Na izany aza, namaly ilay mpianatra mailo fa ny Repoblikan'i Sina (Taiwan) dia lehibe kokoa noho ny nosy Hainan, ny tendrony atsimo indrindra any Shina, izay naseho tamin'ny sari-tany. Avy eo dia nilaza ilay mpiasa fa ny Repoblikan'i Sina (Taiwan) sy Hong Kong dia tsy tafiditra afa-tsy tamin'ny fampisehoana nataon'i Dior momba ny “Greater China.”
Lahatsary iray avy amin'ilay hetsika izay naneho ny sarintany niseho tao amin'ny tranokala microblogging Shinoa Weibo, izay niteraka resabe teo amin'ireo mpampiasa. Ny sasany mpampiasa aterineto Shinoa 'tia tanindrazana' dia nahatezitra ny sasany nitaky ny fandroahana ilay mpiasa. Ny fialan-tsain'i Dior dia nanjary iray amin'ireo lohahevitra malaza indrindra tao amin'ny Weibo an'i Shina tamin'ny Alakamisy, ary voalaza fa izy no faharoa notadiavina teny farany teny amin'ny lampihazo.
Tsy vao sambany ny orinasa mpamokatra entana lafo vidy no miala tsiny amin'ny gaffe mba hisorohana ny hatezeran'ny mpanjifa sy ny governemanta amin'ny iray amin'ireo tsena lehibe indrindra manerantany. Tamin'ny volana Aogositra, nanjary nodorana ny marika amerikana Coach, trano lamaody Francesa Nomery ary Versace goavambe italianina Versace noho ny fitanisana an'i Hong Kong, ny Repoblikan'i Sina (Taiwan) ary Macao ho firenena misaraka.